How AIKI Services Is Standardizing Blue-collar Jobs In Nigeria
Kedụ ka ọrụ AIKI si hazigharị ọrụ ndị na-acha anụnụ anụnụ na Naịjirịa
18 awa gara aga
N'ụwa nke ọrụ taa, mmadụ ọ bụla na-ahọrọkarị ịrụ ọrụ na-acha ọcha karịa ụdị ọrụ ọ bụla ọzọ.
Nke a na-abịa dịka ihe ijuanya n'ihi na ọ na-enye ndị mmadụ ogo nke ezigbo ego nke nwere ike imecha zute.
Enwekwara ọrụ na-acha anụnụ anụnụ, nke nwere ike ịbụ onye maara ihe ma ọ bụ onye na-enweghị ọrụ ma na-etinyekarị ọrụ aka na ịkwụ ụgwọ a na-enwetakarị site na ụgwọ awa.
Nkọwapụta ọrụ ha na-agụnyekarị ha imezi na ịrụzi ọrụ.
N'adịghị ka ọrụ na-acha ọcha, ndị mmadụ n'otu n'otu na-acha anụnụ anụnụ nwere ike ọ gaghị enwerịrị akararịrị mbụ iji nweta ọrụ. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ha enweghị nkà achọrọ iji nwee ọganihu na ọrụ ha.
N'oge a, ọ nwere ike isiri anyị ike inweta ọrụ nke ọ bụghị naanị onye ọrụ aka nwere aka ma ọ dị mma ma nwee ntụkwasị obi nke na-agaghị ada mbà n'ihi na ọ bụ ndị mmadụ n'otu n'otu na ọrụ ahụ gosipụtara ọkwa ụfọdụ nke erughị eru na enweghị ntụkwasị obi.
N'ihi nke a, Hafsatu Shinkafi mepụtara ikpo okwu, Ọrụ AIKI nke dị na njem iji wulite ngalaba olu ọhụrụ na Nigeria.
Onye oru ohuru ohuru dika ya si di bu onye n’ileputa oru di nkpa na nke di nro nke choro iji aru oru na ulo oru teknụzụ nke oge a site na akwukwo ndi ozo.
N'ụzọ bụ isi, nke malite bụ ebe nrụọrụ weebụ na-aga na ọtụtụ ihu na-ejikọ ndị ahịa na ndị ọkachamara nwere nchekwa, ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ndị ruru eru site na arịrịọ ozugbo maka ọkụ eletrik, friji, ọkpọkọ mmiri na ọrụ.
Ikpo okwu a na-enyekwa ọrụ teknụzụ ngwaahịa achọrọ ọzọ dị elu.
Hafsatu, Onye guzobere Ọrụ AIKI kpọọrọ anyị site na otu mbido si akọwapụta ọrụ na-acha anụnụ anụnụ na Nigeria.
Inwe otu afọ 5 na-abaghị uru na-abaghị uru nke a kpọrọ I Am Change, yana oke agụụ ya maka mmepe mba ahụ, mmụọ nsọ ya ịmalite Ọrụ AIKI tụpụtara site na ọrụ mmepe mmekọrịta ya nke dugara ya na ịchụ nta ego mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Hafsatu kọwara na mmalite bootstrapped bụ mmalite na ụlọ ọrụ dabara adaba maka ndị ọrụ injinia MEP a zụrụ azụ ma kwado.
“Isi nkà / akụkụ atọ anyị lekwasịrị anya bụ ọrụ mmezi, ọrụ nrụnye na nrụzigharị dịka nrụzi AC, Ndozi Refrigerator na ndozi eletriki eletrik.
A zụrụ ndị ọkachamara AIKI ma gbaa asambodo ha site n’aka ndị ọrụ ‘Industrial Training Fund’ (ITF) na ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ ‘German Industry and Commerce’ na Naịjirịa, ha abụọ bụ ndị ọrụ gọọmentị. ”
Dị ka ya si kwuo, ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ German na-egosi ndị ọrụ aka AIKI ma nyekwa ọrụ site na asambodo.
"Ihe anyị bu n'obi ime na ọrụ AIKI bụ iweli ọkwa nke teknụzụ na Naịjirịa ma dozigharị ngalaba ndị na-acha anụnụ anụnụ na ndị ọrụ ntanetị na Naịjirịa.", ọ gbakwụnyere.
Na mbido ozi, Hafsatu kwuru, “Ebumnuche anyị ugbu a bụ ịnye ndị ọkachamara kachasị mara ahịa n’ahịa site na teknụzụ na ngwaọrụ. Yana iweli ọkwa nke teknụzụ na Naịjirịa. "
M n'ozuzu, AIKI na-ezube ịhazi ngalaba ndị na-acha anụnụ anụnụ na Nigeria ọkachasị nkà na ụzụ na ndị ọkachamara.
Mmalite ebumnuche ime nke a site n'ịzụ ndị ọrụ na-acha anụnụ anụnụ na ibulite usoro ọzụzụ ugbu a na Naịjirịa.
“Anyị na-ezubekwa ịhọpụta ndị ọkachamara kachasị mma ebe ahụ site na iji ngwa teknụzụ iji nweta ndị ọrụ aka dị na Naịjirịa wee kụzikwuo ma gosipụta ha na nka siri ike ma dị nro.
Anyị kwenyere na ihe ndị a bụ ihe ndị ọkachamara dị elu nke sitere na onye ọrụ nwere nkà dị ala. ”
Kedu otu Ọrụ AIKI si arụ ọrụ
Akụkụ teknụzụ nke Ọrụ AIKI bụ ikpo okwu websaịtị ya, ebe ngwa ọrụ ya bụ bot bot na weebụsaịtị ya.
"WhatsApp na-abụkarị ebe mbụ ntinye dị ka ngwa ọrụ aka na Nigeria yana ọ na-arụ ọrụ maka anyị, yabụ anyị ga-abanye na nke ahụ.", ọ kọwara
Mmalite na-eji usoro ntanetị nke ya iji nyochaa ndị ọrụ ntanetị na ha gafere nyocha nyocha nke teknụzụ tupu ha abanye.
“Anyị na-anabatakwa arịrịọ ọrụ na ndị ahịa na-arịọ n’elu ikpo okwu. Weebụsaịtị anyị bụ ebe mbụ anyị na-akpọ ndị ahịa anyị na onye ọ bụla na-achọ ozi gbasara anyị ma ọ bụ na-achọ ịkpọtụrụ anyị. ”
Njem Ọrụ AIKI
Mbido amalitela ọrụ mana ọ hibeghị ọrụ gọọmentị, agbanyeghị na ya na ITF na AHK Nigeria (Ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ German na Azụmaahịa na Nigeria).
Dabere na onye guzobere ya, ụlọ ọrụ abụọ a akpọtụrụ aha na-enyocha ụlọ ọrụ ọtụtụ oge tupu ha akwado ha ma soro ha na-emekọrịta ihe.
Ugbu a, mmalite ahụ na-azụ ndị ọkachamara 30 na ITF Lagos ma ha ga-enweta asambodo mba ụwa site na otu mba injinia kachasị mma n'ụwa (ntụgharị Germany).
Ndị ahọpụtara ugbu a họpụtara site na ọdọ mmiri nke ndị ntinye akwụkwọ 60.
"Anyị agabigawo kwa nke siri ike n'otu usoro ajụjụ ọnụ anyị na ndị ọrụ ntanetị anyị wee họrọ nke kachasị mma site na ọnụ ọgụgụ buru ibu n'ime ha.", Hafsatu kwukwara
Hafsatu bụ onye malitere ọrụ ya na teknụzụ site na mmemme mmalite Accelerator bidoro na atụmanya ya maka ọdịnihu ga-abụ onye ndu ahịa n'inye ndị ọkachamara kachasị mma n'ahịa na ọrụ nka chọrọ.
“Ọzọkwa, iji tinyekwuo nkà na ụzụ na ọrụ na ọzụzụ na ndepụta nke ọrụ anyị. Anyị ga-achọ ịbanye na ọrụ mmanye mmanụ na gas ka anyị na-aga n'ihu. ”, Hafsatu kwukwara
Ihe Onyonyo Apụtara: Hafsatu Shinkafi, Onye guzobere Ọrụ AIKI
Ihe egwuregwu Nigeria bidoro Lovefootball na ejikọ bọọlụ Fọọlụ maka fansgwọ Ọrụ